अष्टाङ्ग काव्ययात्रा [यात्रा संस्मरण] – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
अष्टाङ्ग काव्ययात्रा [यात्रा संस्मरण]
२०७७ पुष २५, शनिबार ०९:३८ गते
एउटा पुस्तक विमोचन कार्यक्रमबाट छुट्टिने बेलामा कवि सिर्जन अविरलले हार्दिकतापूर्वक भन्नुभयो– “रामहरि सर, स्रष्टाहरुमात्रै मिलेर एउटा टुर कार्यक्रम गरौँ न, मलाई साह्रै इच्छा छ ।”
म पनि यात्रामा रमाउने र रूचि भएको मान्छे । यस प्रस्तावले खुसी तुल्यायो । छोटो छलफलपछि टुर जाने कुरामा दुवैजना सहमत भयौँ । जाने दिन शुक्रबार वा शनिबार पार्ने र सहभागी साथीहरु सञ्जीवनी रस पेयकारी हुनुपर्ने सीमारेखा पनि निर्धारण गरियो । बाँकी सबै कार्यक्रमको योजना बनाउने जिम्मा मैले पाएँ अनि हामी छुट्टियौँ ।
भोलिपल्ट कवि प्रकाश चापागाईंलाई टुर कार्यक्रमको सोच प्रस्ताव गरेँ । उहाँ खुसीसाथ सहमत हुनुभयो । एउटा जिपमा आठ जना अटाइने रहेछ । उक्त सङ्ख्या पूरा गर्न हामी दुईले मन खाएका उपयुक्त साथीहरुलाई सम्पर्क गर्दै गयौँ । सङ्ख्या पूरा भयो ।
पुस ३ र ४ गते (२०७७) प्रातः ६ बजे यात्राको साइत जु¥यो । प्रस्थानबिन्दु लायन्सचोक नारायणगढ र गन्तव्य थियो– कुलेखानी (मार्खु) इन्द्रसरोवर, चित्लाङको अर्गानिक कृषिफार्म र मकवानपुरको दामन ।
यात्रामा सहभागी हुने भयौँ– डा. धनेश्वर भट्टराई, डा. एकनारायण पौडेल, धनराज गिरी, रेशम विरही, रणेन्द्र बराली, प्रकाश चापागाईं, सिर्जन अविरल र रामहरि श्रेष्ठसमेत जम्मा आठ जना ।
यात्रालाई थप मह¤व प्रदान गर्न गाडीमा ब्यानर लगायौँ–“अष्टाङ्ग काव्ययात्रा ।” तर “बाह्र वर्षमा पोइ आएको, म अभागिनीलाई ज्वरो आएको” भनेझैँ भयो, यात्राका प्रस्तावक सिर्जनजीलाई नै । उहाँ प्रस्थान मितिभन्दा दुई दिनपूर्वबाट बिरामी पर्नुभयो । यात्रामा समावेश हुन असमर्थ हुनुभयो । यात्रामा उहाँको अभावले स्वभावतः नमीठो लाग्यो, सबै साथीहरुलाई । अन्तमा सात जनामात्रै भए पनि जाने भयौँ ।
यात्रा आरम्भदेखि नै अटुटरुपमा गफगाफ चलिरह्यो । पौने आठ बजे मनहरी बजार कटेपछि चियानास्ता खायौँ । मकवानपुर भैंँसेमा पुग्दा घडीमा नौ बज्दै थियो । कुलेखानी पुग्न भैंँसेबाट बाइरोडको बाटो (त्रिभुवन राजपथ) छोडेर भीमफेदीतर्फ मोडियौँ । खाना कहाँ खाने भन्ने प्रश्न उठ्यो । भैँसेको नाम उच्चारण भएपछि प्रकाश चापागाईंले प्रसङ्ग उठाउनुभयो– “यो भैँसे भन्ने ठाउँका बारेमा कहिल्यै नबिर्सने संस्मरण छ मसँग ।” कहानी सुनाउनुभयो– “सात कक्षामा अध्ययन गर्दैगर्दा स्कुलको कार्यक्रममा चितवनबाट काठमाडौँ जाँदै थियौँ । सरले भैँसेमा नै खाना खाने बताए । भैँसे नामकरण भएकाले यो ठाउँ भैँसीको मासु पाइने ठाउँ हो भन्ने कुरा मेरो दिमागमा बसेको थियो, तसर्थ यहाँ खाना खान मन लागेन । ‘यो ठाउँको नाममात्र भैंँसे हो, भैंँसीको मासु पाइने ठाउँ होइन, खसीकै मासुमात्रै पाक्छ यहाँ’ भनेर सरले विश्वास दिलाए । अनिमात्र भैंँसेमा खाना खान मञ्जुर भएको थिएँ । खसीको मासु नै सम्झेर खाना खाएँ, तर पछि मासु थप गर्दा निकै ठूलो हड्डी प¥यो । यो त भैँंसीकै हड्डी हो भन्ने ठानेँ अनि मलाई एक्कासि पेटै निख्रने गरी थालमै उल्टी आयो । वरिपरि खाँदै गरेका सबैको थालमा छिटा प¥यो । अनि, सबैले आधा खाना खेर फाल्नुप¥यो ।”
भीमफेदीतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा मलाई पनि २०३० सालको नमीठो यथार्थको स्मरण भयो । त्यसबखत वन फडानी गरेको र सुकुमबासी बस्ती बसालेको आरोपमा मेरा पिताजी जेल पर्नुभएको थियो । उहाँ यही भीमफेदीे कारागारमा हुनुहुन्थ्यो । आज सड्चालीस वर्षपश्चात् उही भीमफेदीकै बाटो भएर कुलेखानीको यात्रामा छु । त्यतिबेला वर्षाको समय थियो । काठमाडौँबाट हेटौँडा जाने ट्रकको पछाडि बसेर दुई दिनमा आइपुगेको थिएँ भैंँसेसम्म । अनि, भैँसेबाट पैदल हिँडेरै भीमफेदी पुगेको थिएँ पिताजीलाई भेट्न ।
हाम्रा गाडी चालक सुवर्ण भीमफेदीआसपासकै रहेछन् । रणेन्द्र बरालीले चालकसँग प्रश्न राख्नुभयो– “खास भीमफेदी बजार कहाँ हो थाहा छ गुरूजी ?”
चालकले भने– “यहीमात्र हो भीमफेदी, अर्को भीमफेदी नै छैन ।”
बरालीेले भन्नुभयो– “हैन, ओरिजनल भीमफेदी त अर्कै हो ।” गुह्य कुरो भन्नुुभयो– “धेरै वर्ष पहिलेको भीमफेदी बजारलाई नामनिसाना नै नरहने गरी बाढीले बगाएर लगेको थियो । अहिलेको भीमफेदी बजार त फरक स्थानमा बसेको हो ।”
कुरो वास्तविक नै रहेछ । निकै फराकिलो एरिया बाढीले सखाप पारेको रहेछ । कुनै समयमा बाढी पसेको कुरा तत्स्थानको भूदृश्यले बताइरहेको थियो ।
भीमफेदी बजारलाई छिचोल्दै पुल तरेर अगाडि बढेपछि निर्माणाधीन ग्राभेल सडक र उकालो घुम्ती पार गर्दै पुग्यौँ चिसापानी बजार । दस बजे पुग्यौँ जरखेत । देख्दै रहरलाग्दा गाजर बिक्रीका लागि राखेको देख्यौँ । अर्गानिक गाजर उत्पादनका लागि प्रसिद्ध रहेछ यो ठाउँ । दुई किलो गाजर किन्यौँ र सबैले गाजर टोक्दै अगाडि बढ्यौँ ।
निकै उचाइमा पुगेपछि एउटा थुम्को देखियो । त्यो ऐतिहासिक गढी रहेछ । एउटा भट्टीअगाडि गाडी रोक्यौँ । गढीको अवलोकन गर्न चाह्यौँ, तर गेटमा ताला लागेको रहेछ । चाबी मागेर भित्र प्रवेश गर्ने प्रयास ग¥यौँ । पूजारीले चाबी लिएर कतै गएका रहेछन् । गढी अवलोकनको इच्छा अवरूद्ध बन्यो । बाहिरबाटै गढीको फोटो खिच्यौँ । भीमफेदीतर्फ सोझ्याएर राखेको तोप परैबाट पनि देखियो । यसलाई “कालीतोप” भनिने रहेछ । स्थानीयको भनाइअनुसार यो नै नेपालको सबैभन्दा ठूलो तोप हो । गेटबाहिर एउटा साइनबोर्ड थियो र त्यसमा निम्न कुराहरु लेखिएको थियो ः
श्री बटुक भैरव मन्दिर भीमफेदी–८ गढी, मकवानपुर ।
१) यस मन्दिर परिसरमा महिला प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
२) श्रावण महिनामा भोगबली दिन निषेध गरिएको छ ।
३) श्रावण महिनाबाहेक अन्य महिनामा मङ्गलबारमात्रै बलिपूजा हुनेछ ।
हामीलाई जिज्ञासा जाग्यो, यस मन्दिरमा महिलाले प्रवेश नपाउनुको कारण । एउटा किंवदन्ती यस्तो सुनियो– “कुनै राजाले लडाइँ गर्न जानुअघि यस बटुक भैरव मन्दिरमा आएर भाकल गरेका थिए रे । ‘मैले राज्य जित्न पाएँ भने एउटी महिलाको भोग दिनेछु’ भनेका थिए रे । उनले राज्य जिते, तर महिलाको बलि दिएनछन् । त्यसपछि “यहाँ जो महिला प्रवेश गर्छिन् उनी रगत छादेर ठहरै हुन्छिन्” भनेर बटुक भैरवले श्राप दिएछन् । त्यसपछि यहाँ जो महिला प्रवेश गर्दा पनि बान्ता आउने भयो रे ।” तसर्थ, महिलालाई प्रवेश निषेध गरिएको रहेछ ।
साढे दस बजे टेकियो समुद्र सतहबाट २०३७ मिटर उचाइमा रहेको कुलेखानी देउराली बजार । पारिलो र रमणीय स्थान रहेछ । घामको न्यानोले हामीलाई स्वागत ग¥यो । उत्तरी क्षितिजमा देखियो मनोरम धौलागिरि, गणेश हिमाल र ल्होत्से हिमश्रृङ्खला । त्यसभन्दा वर नीला पहाडहरु र अझै वर देखिए, हरियाली सुन्दरता पस्किरहेका पहाडी श्रृङ्खलाहरु । अनि, यसैकोे काखमा देखियो अप्सराझैँ मन्त्रमुग्ध मुस्कान पस्केर पर्यटकलाई लोभ्याइरहेको इन्द्रसरोवर । यहाँ खाना राम्रो पाइने कुरा बरालीजीलाई थाहा रहेछ । यहीँ खाने निधो ग¥यौँ । वरिपरिका होटलहरुमा नजर डुलाउँदै गर्दा सुगगाभा देउराली होटलले ध्यानाकर्षण ग¥यो । त्यसैमा प्रवेश ग¥यौँ । त्यस होटल सञ्चालक भाइ गोविन्द पथिक गजलकार नै परेछन् । धनराज गिरी सरलाई पनि गजलकार भनेर चिनेका रहेछन् । आपसमा परिचय भयो । होटलमै सस्वर गजल पस्किदिनुभयो धनराज सरले । माहोल रमाइलो बन्यो ।
माहोल अझै रमाइलो बनाउने मुड बन्यो, प्रकाश चापागाईंजीलाई । प्रसङ्ग उठाउनुभयो– “खाना खानुभन्दा पहिले यो रमाइलो यात्राको खुसीयालीमा अलिकति टुच्च पारौँ न (कि ?) ।” अर्का मित्रले हाँ मा हाँ मिलाउनुभयोे– “हामी रमाइलो गर्न नै आएका हाँै, त्यसैले के फरक पर्ला र ?” स्वीकार भयो सबैबाट । वेटरलाई बोलायौँ । चाहिएको कुरा अर्डर ग¥याँै । क्षणभरमै गिलास, बोतल र माछामासु आइपुग्यो टेबलमा ।
चियर्स भन्दै टुच्च कार्यक्रमको शुभारम्भ भयो । यात्रा उत्सवमा सबैको नाउँ जोडेर कविता सुनाउनुभयो, धनराज सरले । त्यसपछि मैले पनि यात्राकै कविता पस्किएँ । माहोल झन् रमाइलो बन्दै गयो । टुच्च कार्यक्रमले झन् पछि झन् उच्च रुप लिँदै गयो । मनचाह पियौँ । मस्त बन्यौँ सबै । धनराज सरको गजल गायन झन्झन् फुर्दै गयो । सबा दुई घन्टा बितेको पत्तै भएन ।
कुलेखानी बाँधतर्फ अगाडि बढ्दैछ हाम्रो सवारी । मार्खु पुग्ने दुईवटा बाटो रहेछ । एउटा घुमाउरो, अर्को सोझो तर सोझो बाटोमा सेनाको ब्यारेक रहेछ । सर्वसाधारण र यात्रुवाहक गाडीलाई ब्यारेकको बाटोबाट जान निषेध रहेछ । हामीले भने ब्यारेककै बाटो रोज्यौँ । भनसुन गरेर ब्यारेकको बाटोबाटै जान सकिन्छ भन्ने विश्वास लियौँ । गेटमा पुगेपछि रोकियौँ । रणेन्द्रजी र म भएर ड्युटीमा रहेका सैनिकसँग अनुरोध ग¥यौँ । “फर्केर अर्को बाटो जानुहोस्, यताबाट जान मिल्दैन” भन्ने जवाफ दिए । हाम्रो परिचय दियौँ । गाडीको ब्यानर देखायौँ । केही बेर आनाकानी गरे, तर पछि जाने अनुमति दिए । ब्यारेकको बाटो जाँदा इन्द्रसरोवरलाई अझ राम्रोसँग अवलोकन गर्न पाइने रहेछ ।
मार्खु पुग्दा दुई बज्यो । निकै जाडो होला भन्ने सोचेका थियौँ, तर चर्को घामले गर्दा ज्याकेट खोल्नुपर्ने गरायो । रिसोर्ट, गेस्ट हाउस र होमस्टेको सुविधा भएको एरिया रहेछ यो । सर्वप्रथम बासको बन्दोबस्त गरौँ अनि घुमघाम गरौँला भन्ने सल्लाह ग¥यौँ । चार–पाँचवटा होटट चहा¥यौँ । जहाँ पनि “आजलाई त कोठा छैन, प्याक भइसक्यो” भन्नेमात्र उत्तर पाइयो । कता कोठा नै नपाइने हो कि भन्ने बनायो । बल्लतल्ल होटल पाइयो । विशेषगरी, शुक्रबार र शनिबार यहाँका होटल, रिसोर्ट, होमस्टे सबै प्याक हुँदा रहेछन् ।
झोलाहरु होटलमा थन्क्याएर लाग्यौँ इन्द्रसरोवरतर्फ । आठ–दसवटा काठेडुङ्गा र दुईवटा मोटरबोट देख्यौँ । बोटिङमा सयर गर्न आएका कलेजस्तरका युवायुवतीहरुको चहलपहल निकै थियो । काठेडुङ्गाभन्दा मोटरबोट नै सुरक्षित मान्यौँ । रेट रहेछ जनही रू. ३००, टिकट काट्यौँ । पन्ध्र मिनेटजति इन्द्रसरोवर जलयात्राको आनन्दमा रम्यौँ । यति नै बेला मलाई भारतको नैनीतालको याद आयो । नैनीतालभन्दा अझ सुन्दर लाग्यो आफ्नै देशको इन्द्रसरोवर । वर्षमा हजारौँ नेपालीहरु नैनीताल अवलोकन गर्न पुग्छन्, तर यो देशको नाभीमा अवस्थित इन्द्रसरोवर भने कति नेपालीलाई अत्तोपत्तो छैन । बत्तीमुनिको अँध्यारो भएको छ । खासमा सडक राम्रो नभएकाले ओझेलमा परेको छ, इन्द्रसरोवर । प्रदेश वा केन्द्र सरकारले सडक र बजारको प्लानिङ राम्रो गरिदिए पर्यटकहरु धान्नै नसक्ने गरी ओइरिने छन् यहाँ । रोजगारी, व्यवसाय र राजस्व पनि त्यसरी नै बढ््नेछ ।
होटलको साँझ पृथक माहोलमा निकै रमाइलोसँग बित्यो । घरको छतमा काटेको ड्रममा आगो दन्काएर तापियो । त्यही आगोमाथि फलामे जालीमा मासु पोल्यौँ । आँतले मागुन्जेल खायौँ, पियौँ । यो कार्यक्रमको छुट्टै मजा आयो । यतिले मात्र पनि यात्रा पूर्ण सार्थक भएको महसुस ग¥यौँ । बाँकी सबै रमाइलो थप उपलब्धि हो झैँ लाग्यो । साँझ परेपछि प्रत्येक होटलमा बारविक्युको व्यवस्थापन यहाँको विशेषता रहेछ ।
भोलिपल्ट प्रातः सात बजे होटल छाड्यौँ । लाग्यौँ, चित्लाङको अर्गानिक कृषिफार्म अवलोकनार्थ । हाम्रो सवारी अगाडि बढ्दै छ । डाँडापाखाभरि झलमल्ल घाम छ, तर बारीको पाखाभरि सेताम्मे तुसारो जाम छ । यहाँको फरक अनुभूति सँगाल्दै अघि बढ्यौँँ । सोधखोज गर्दै सबा आठ बजे पुग्यौँ, अर्गानिक कृषिफार्म चित्लाङमा । भ्रमणमा आएका स्कुले बस चारवटा र केही जिपहरु देख्यौँ । भ्रमणमा आएका यात्रुहरुको चहलपहल पनि बाक्लै देखियो । यही फार्ममा होमस्टे र होटल पनि सञ्चालनमा रहेछ । बिहानको नास्ता यही होटलमा खायौँ । अर्गानिक कृषिफार्ममा आधुनिक पद्धतिले गरिएको धेरै प्रकारका खेती अवलोकन गर्न पाइन्छ भन्ने सोचेका थियौँ, तर नासपातीको मात्र फार्म हेरेर चित्त बुझाउनुप¥यो । यहाँका मन्दिर, राणाकालीन दरबार र बाख्राको दूधबाट बन्ने नेपालकै ठूलो चीज उद्योग अवलोकन गर्न भने समयाभाव रह्यो ।
चित्लाङबाट चन्द्रागिरि पुग्न जम्मा ८ किलोमिटर र थानकोट पुग्न १५ किलोमिटरमात्रै रहेछ । अबको हाम्रो गन्तव्य थियो– दामन हिलस्टेसन । बाटोमै पर्ने रहेछ बज्रबाराही सरस्वती बजार । हाम्रो अगाडि अगाडि एउटा मालवाहक ट्रक जाँदै थियो । ट्रकको पछाडि ढालामा लेखिएको कोटेसनमा हाम्रो आँखा ठोक्कियो । कोटेसन यस्तो थियो–
किताब च्यातिएपछि गाताको के काम
दुःखमा काम नलाग्ने नाताको के काम
वर्षातमा रूझेर निथु्रक्क भएपछि
मुसुक्क हाँसेर दिएको छाताको के काम !
यतिनै बेला देख्यौँ, उर्वर खेतमा निर्मित पक्की भवनहरु । उक्त कोटेसनमा थपेर डा. एकनारायणले भन्नुभयो– “यति उर्वर खेतमा घर बनाएपछि माटाको के काम ।”
साढे दस बजे पुग्यौँ पालुङ थानाबजार । बजारमा निकै चहलपहल थियो, तर घुम्ने रहर जागेन । गाडीबाट नझरीकन आँखामात्र डुलायौँ । एघार बजे पुग्यौँ दामन । समुद्र सतहदेखि २३२२ मिटर उचाइमा रहेको दामन हिलस्टेसन पर्यटकीय दृष्टिकोणले मह¤वपूर्ण मानिन्छ । ज्यादै जाडो बढ्दा यहाँ हिउँले ढाकिन्छ । हिउँको सौन्दर्यमा रमाउन र हिउँ खेल्नकै लागि वरिपरिका जिल्लाबाट युवायुवतीहरु यहाँ आउने गर्दछन्् । तर, यतिबेला हिउँ परेको थिएन । मौसम स्वच्छ र जाडो थियो तर झलमल्ल लागेको घामले आनन्द र न्यानो प्राप्त भइरहेको थियो । भ्यू–टावरबाट धौलागिरि र अन्य हिमश्रृङ्खलाहरु अवलोकन गर्ने र दृश्यलाई क्यामरामा कैद गर्ने धोको भने पूरा हुन पाएन । कारण, गेटमा सूचना लेखिएको थियो– “टावरमा मर्मत कार्य भइरहेकाले हाल बन्द छ ।” अनि, हिस्स प¥यौँ सबै । केही साथीहरुले दामनमा खाना खाने कि भन्दै थिए, तर कसैलाई पनि भोकको महसुस भएन । चियामात्र पियौँ । एकछिन दामन बजार घुम्यौँ । सडकबाट हिमश्रृङ्खला नदेखिने रहेछ । कुनै होटलपछाडिबाट उँचो स्थानमा गएर हिमश्रृङ्खला अवलोकन गर्न चाह्यौँ, तर बाटो पाएनौँ । एक जना स्थानीय भाइले बाटो देखाउँदै भने– “उ त्यो होटलबाट पछाडि निस्कने बाटो छ, त्यहाँबाट हिमाल राम्रोसँग देख्न सकिन्छ ।” होटल साहूजीले केही भन्ने हुन् कि भनेर सङ्कोच मान्दै भित्र पस्यौँ, तर होटल साहूजीले खुसीसाथ भने “जानुस् जानुस्, हिमाल हेर्नुहोस् । तल ओर्लिएर कोठाहरु पनि हेर्नुहोला ।”
साँच्चै नै त्यस होटलकोे पछाडिबाट मनमोहक धौलागिरि, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्र«े हिमश्रृङ्खला देखिने रहेछ । दृश्यलाई क्यामरामा कैद ग¥यौँ । फर्कनै लाग्दा तलतिर काष्ठकला डिजाइनको भ¥याङ देख्यौँ । अवलोकन गर्दै तल झ¥यौँ । तल त फाइभ स्टारकै तुलना गर्न लायक भिआइपी गेस्ट रूमहरु रहेछन् । यति सुन्दर कलात्मक कोठाको कल्पना नै गरेका थिएनौँ । हरेक कोठाबाट वर हेर्दा हरियाली जङ्गल र पर हेर्दा हिमश्रृङ्खला देखिने रहेछ । यसपछि टावर चढ्न नपाए पनि त्यति मनखत लागेन ।
साढे बाह्र बजे लामीडाँडा पुग्यौँ । सानो होटल देख्यौँ । गुरूजीलाई गाडी रोक्न लगायौँ । होटलमा पसेर आठ जनाका लागि पुग्ने खाना छ÷छैन सोध्यौँ । “पाँच मिनेट पर्खनुपर्छ, हुन्छ ?” भने । ल हुन्छ भनेर खाना अर्डर ग¥यौँ । होटलबाहिर नै ढिस्कोमा पार तापेर एउटै टेबलमा गोलाकार बसेर खाना खाँदा निकै आनन्द महसुस ग¥यौँ । सबै साथीहरुबाट यात्राको समीक्षा ग¥यौँ । डा. धनेश्वर भट्टराई– “कोरोना महामारीले खुम्चिएर बसेका थियौँ, जुन योजनाअनुुार हामी आयौँ यो यात्रामा खुब मजा आयो ।” रेशम विरही– “तपाईंहरुसँग यो माहोलमा लगभग बीस वर्षपछि भेट भएको छु, मेरा लागि यो यात्रा पुनर्जन्मको यात्रा हो र क्यान्सरमाथिको विजय पनि हो ।” डा. एकनारायण पौडेल– “चितवनका साहित्यकारहरुका लागि उदाहरणीय कार्यक्रम हो । यसले सारा हाम्रा साहित्यकारहरुलाई सबै किसिमका सानातिना कुराहरुलाई बिर्सेर इन्जोय गर्ने नमुना दिनेछ र पथप्रदर्शन गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ । रेशम दाजु अस्वस्थताका बाबजुद पनि आउनुभएको छ, यो धेरै ठूलो कुरा हो ।” रण्ोन्द्र बराली– “आजको हाम्रो जुन यात्रा भयो यो ऐतिहासिक भएको छ । चितवन जिल्लामा बसेर साहित्यिक क्षेत्रमा मह¤वपूर्ण भूमिका निभाइरहनुभएका साथीहरुसँग यसरी सहयात्रा गर्न पाउँदा म एकदम प्रफुल्लित भएको छु ।” धनराज गिरी– “पटकपटक एउटै गल्ती गर्ने गरेको छु, मान्छे हुँ म मान्छे भनी मर्ने गरेको छु ।” प्रकाश चापागाईं– “यो र त्यो भनेर कित्ताकाट गर्ने नजरियालाई यस यात्राले समाप्त पारिदिएको छ ।”
यात्रामा बाटो काटेको पनि महसुस नै नहुने गरी हामीबीच कहिल्यै नखुलेका अन्तरङ्ग कुराहरु आपसमा सुन्यौँ र सुनायौँ । साहित्य, कला, सङ्गीत, संस्कृति र स्वदेश–विदेशका अनुभवहरु आदानप्रदान गर्न पायौँ । समसामयिक सामाजिक र राजनीतिक सवालमा पनि भलाकुसारी ग¥यौँ । भौगोलिकताको अनुभव र अनुभूतिहरु सँगाल्यौँ । स्रष्टामनमा सङ्लिएका भावनाहरु र अग्लिएका चाहनाहरुको यो सहयात्रा वास्तवमै सोचेभन्दा मह¤वपूर्ण, मनोरञ्जनपूर्ण, जानकारीमूलक, स्मरणीय र अनुकरणीय बन्न पुग्यो ।